My buug muujinaysaa in ay tahay Ilaah oo abuuray koonkan iyo waxa ku jira. Waxa kale oo uu xaqiijinayaa ilaahnimadiisa Ciise Masiix iyo in dhulka uu ka soo laabtay dhaw.
Hagaajinaya Deedadka kuu ogolaanaya in aad si loo xaqiijiyo in dhibaatooyinkoodii oo dhan waa la joogto ah u koraya dhowr sano.Laakiin waxaan nahay sharaxaad iyo waa kitaabka.
Ugu dambayntii waa aan lahaa si ay u tagaan caddeyn ah oo ka raadso in dhammaan calaamadaha iyo waxsii sheegista ah ee times dhamaadka Herald soo laabashada Ciise Masiix dhammaatay maalin kasta iyo in ay tani si kasta oo ay noqon kartaa kadis ah sida tiro ka mid ah waxsii sheegyada in samaynta muhiim ahaa.
Tani waxa ay si qoto dheer noloshayda iska beddelay oo sidaasi darteed waxaan go’aansaday in la abuuro blog this « Return Daaciga Boqorka »taas oo aan la daabacay maqaalo badan oo ku qoran luqado oo dhan oo ay ku war aadanaha oo dhan dhacdadan cajiibka ah iyo sidoo kale qayb ka baraaruga dunida Christian si qof walba si ay u soo laabashada Rabbigeenna Ciise Masiix iyo King, ina Ilaah oo keliya oo diyaarin kartaa maankiisa iyo naftiisa.